သင်၏ MacBook ပေါ်ရှိကီးဘုတ်အလင်းသည်ပေါ်မလာသလား။ ဒါကဖြစ်ပျက် | Gadget သတင်း
ပါပလော Ortega | | ယေဘုယျ, NOTICIAS, ကွန်ပြူတာများ, လက်တော့ပ်
၏အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များတစ်ခုမှာ Laptop keyboard ကို backlit လုပ်ထားရမယ် ငါတို့ဘာမှပြanyနာမရှိဘဲအမှောင်ထဲမှာရေးနိုင်မှာပေါ့။ Actualidad Gadget ကိုဖတ်သူများကကျွန်ုပ်တို့အားအောက်ပါမေးခွန်းကိုမေးခဲ့သည် -“ ဘာကြောင့်တစ်ခါတလေငါ MacBook keyboard light ကိုမဖွင့်နိုင်တာလဲ၊ ပြီးတော့ keyboard light ကိုထိန်းညှိဖို့ option က blocked လုပ်လိုက်သလိုမျိုးဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့သင်္ကေတ? " အဖြေမှာရိုးရှင်းပြီးဖြေရှင်းနည်းမှာ ပို၍ ပင်လွယ်ကူပါသည်။
တူသောကီးဘုတ်များ MacBook သည်အလင်းကိုစစ်ဆေးသောအာရုံခံကိရိယာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် ပတ်ဝန်းကျင်။ ဒီအာရုံခံကိရိယာသည်လက်ပ်တော့ကင်မရာဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည်သင်တောက်ပသောနေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိသောအခါ၎င်းသည်ကီးဘုတ်အလင်းကိုထိန်းညှိရန်ရွေးစရာကိုတိုက်ရိုက်ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ကီးဘုတ်အလင်းကိုသင်ဖွင့်ချင်နေပြီးထို option ကို block လုပ်လိုက်ပါကဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်လုပ်ရမှာကတော့ လက်ပ်တော့ဖြင့်လက်ပ်တော့ပ်အားလက်တော့ပ်၏အလင်းအာရုံခံကိုဖုံးပါကွန်ပျူတာစက်ဘေးမှာတွေ့ရမယ့်စက်ဝိုင်းလေးပါ။ အာရုံခံကိရိယာကိုသော့ခတ်ပြီးတာနဲ့၊ သင့်ကီးဘုတ်ရဲ့ illumination ကိုမြှင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လျှော့ချဖို့ရွေးစရာကဘယ်လိုတိုက်ရိုက်သော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏ gadgets တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏တရား ၀ င်တွစ်တာအကောင့်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို tweet တစ်စောင်ရေးနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ @agadget
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ၄ င်းတို့သည် Bluetooth 4.1 တွင်တွေ့ရမည့်သတင်းများဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » သင်၏ MacBook ပေါ်ရှိကီးဘုတ်အလင်းသည်ပေါ်မလာသလား။ ဒါကဖြစ်ပျက်သည်
ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီနေ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မြင်ခဲ့ပြီးငါ hahahaha ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီလို့တွေးပြီးကြောက်တယ်
ကောင်းတယ် !! အဆိုပါအလှူငွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ =)
MobaLiveCD ဖြင့် disk ပုံရိပ်များကိုဆန်းစစ်ပါ